Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Talen'ny varotra vaovao voatondro ho an'ny The Kartrite Resort & Indoor Waterpark
Benchmark dia nanendry talen'ny marketing an'ny Courtney Dall'Olmo ho an'ny The Kartrite Resort & Indoor Waterpark. Ny fananana Benchmark Resorts & Hotels dia miorina ao Monticello, New York, ao anatin'ny Catskill Mountains, ary misy 1,600 hektara ala, toerana misy ny tranom-pialam-boly Resorts World Catskills. David Kohlasch, tale jeneraly, no nanao izany fanambarana izany.
Courtney Dall'Olmo dia talen'ny marketing sy serasera ho an'ny Topnotch Resort any Stowe, Vermont. Talohan'io dia nitana ny toeran'ny mpanara-maso marketing ho an'ny Trapp Family Lodge malaza, any Stowe ihany koa izy.
Ramatoa Dall'Olmo dia nahazo diplaoma avy amin'ny University of Vermont izay nahazoany mari-pahaizana licence momba ny serasera amin'ny daholobe. Izy no mpandray taloha niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy Benchmark's Sales & Marketing Team of the Year Award. Nifindra tany amin'ny faritra Monticello Ramatoa Dall'Olmo.
Manomboka amin'ny sazy ka hatramin'ny famonoana: Nampitandrina ireo mpizahatany Phuket hieritreritra indroa momba ny «selfie runway»